Ungaze Ube “Nomsindo Nxamnye NoYehova” | Funda
IBALI LOBOMI UYehova ‘Undithwalela Umthwalo Mihla Le’
Ungaze Ube “Nomsindo Nxamnye NoYehova”
Bazali​—Qeqeshani Abantwana Benu Kwasebusaneni
Nyamekelanani Nize Nikhuthazane
UElisha Wabona Iinqwelo Zomlilo​—Ngaba Uyazibona Nawe?
SIPHAKULA KOOVIMBA BETHU UKumkani Waba Nemincili!
IMboniselo (Yokufundisa) | Agasti 2013
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiMixe IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
“Bubudenge bomntu wasemhlabeni obugqwetha indlela yakhe, ize nentliziyo yakhe ibe nomsindo nxamnye noYehova.”—IMIZE. 19:3.
Yintoni enokusenza sibe “nom­sindo nxamnye noYehova”?
Ziziphi izinto ezintlanu ezinokusinceda siphephe ukuba nomsindo nxamnye noThixo?
Yintoni esimele siyikhumbule xa sidinyazwa ziingxaki?
1, 2. Kutheni singamele sityhole uYehova ngeengxaki zoluntu? Cacisa.
MASITHI uyindoda esele ineminyaka itshatile yaye wonwabile nomfazi wakho. Kuthi ngenye imini xa ungena kwakho, ufika yonke into ithe saa, inguqulukubhode nje. Ifenitsha ibubutyobo, izitya ziziingceba, singasathethi ke ngekhaphethi. Elo khaya lebhongo lijike layingqushu. Nguwuphi umbuzo ubuya kuwubuza? Ngaba ngothi, “Ungenwe yintoni kodwa lo mfazi?” Okanye, “Ngubani lo usenze le nto?” Akuthandabuzeki ukuba ngulo mbuzo wesibini ubuya kukhawuleza uthi qatha. Ngoba? Kaloku uyazi ukuba inzwakazi yakho ibingenakuze iwenze loo mbhodamo.
2 Yiloo nto kanye eyenzekayo namhlanje kweli khaya labantu, umhlaba, lidlakazwa ziityhefu ezingcolileyo, ugonyamelo nokuziphatha kakubi. Njengabafundi beBhayibhile, siyazi ukuba uYehova akanakuba ngunobangela wazo zonke ezi ngxaki. Wadala lo mhlaba efuna ube yiparadesi ekonwatyiweyo kuyo. (Gen. 2:8, 15) UYehova nguThixo oluthando. (1 Yoh. 4:8) Ukufundisisa kwethu iBhayibhile kuye kwasinceda samazi oyena nobangela weengxaki zehlabathi. Akakho omnye ngaphandle kukaSathana uMtyholi, “umlawuli wehlabathi.”—Yoh. 14:30; 2 Kor. 4:4.
3. Ingenzeka njani into yokuba sijijeke ingqondo?
3 Kodwa ke, asinakusoloko sityhola uSathana ngazo zonke iingxaki zethu. Ngoba? Kaloku unozala wezinye zeengxaki esinazo ziimpazamo esizenzayo. (Funda iDuteronomi 32:4-6.) Nakuba siyivuma loo nyaniso, ukungafezeki kunokusijija ingqondo kusilahlekise siphuphutheke siye kugaxeleka kwiindlela zokufa. (IMize. 14:12) Singakwenza njani oko? Kunokuvuma ukuba sibe negalelo kwiingxaki zethu okanye siqonde ukuba zibangelwe nguSathana, sisenokusuka sityhole uYehova. Sinokude sibe “nomsindo nxamnye noYehova.”—IMize. 19:3.
4, 5. Inokwenzeka njani into yokuba umKristu abe “nomsindo nxamnye noYehova”?
4 Ngaba inokwenzeka ngokwenene into yokuba sibe “nomsindo nxamnye noYehova”? Bekuya kuba lilize ukwenjenjalo. (Isa. 41:11) Ngaba ikho into okunokusinceda kuyo oko? Enye imbongi yakha yathi: “Awunakuze uphumelele xa usilwa noThixo.” Isenokungade yenzeke into yokuba silikhuphe litsole elokuba sityhola uYehova. Kodwa iMizekeliso 19:3 ithi ubudenge bomntu ‘buyayigqwetha indlela yakhe, ize intliziyo yakhe ibe nomsindo nxamnye noYehova.’ Umntu unako ukuba nomsindo nxamnye noThixo entliziyweni yakhe. Xa evakalelwa ngaloo ndlela ubonakala ngeendlela ezingaqondakaliyo. Ngandlel’ ithile, umntu unokuba nenzondo nxamnye noYehova. Xa enaloo nzondo, unokuyeka ukuya ebandleni okanye angawaxhasi kwaphela amalungiselelo okunqula uYehova.
5 Yintoni enokusenza sibe “nomsindo nxamnye noYehova”? Sinokuwuphepha njani loo mgibe? Kubalulekile ukufumana iimpendulo zale mibuzo. Kaloku, lo mba uchaphazela ulwalamano esinalo noYehova uThixo!
YINTONI ENOKUSENZA SIBE “NOMSINDO NXAMNYE NOYEHOVA”?
6, 7. Kwakutheni ukuze amaSirayeli awayephila ngomhla kaMoses aqalise ukukhalazela uYehova?
6 Yintoni enokwenza intliziyo yomkhonzi othembekileyo kaYehova iqalise ukukhalazela uThixo wakhe? Makhe siqwalasele oonobangela abahlanu size sihlolisise imizekelo eseBhayibhileni ebalaselisa indlela abawela ngayo kulo mgibe abathile mandulo.—1 Kor. 10:11, 12.
7 Sinokuphenjelelwa kukumbombozela kwabanye. (Funda iDuteronomi 1:26-28.) AmaSirayeli ayesandul’ ukuhlangulwa ebukhobokeni eYiputa. Ngokungummangaliso, uYehova wabetha abo bacinezeli bangamaYiputa ngezibetho ezilishumi waza emva koko watshabalalisa uFaro nemikhosi yakhe kuLwandle Olubomvu. (Eks. 12:29-32, 51; 14:29-31; INdu. 136:15) Abantu bakaThixo babesele besemgubasini belinde ukungena kwiLizwe Lesithembiso. Ukanti ngelo xesha kanye libalulekileyo, amaSirayeli aqalisa ukumkhalazela uYehova. Kwakutheni ukuze aphelelwe lukholo? Iintliziyo zawo zagutyungelwa luloyiko ngenxa yengxelo embi eyeza nabathile ababethunyelwe ukuya kuhlola elo lizwe. (Num. 14:1-4) Waba yintoni umphumo? Sonke eso sizukulwana asizange sivunyelwe ukungena kwelo ‘lizwe lihle.’ (Dut. 1:34, 35) Ngaba inokwenzeka into yokuba nathi sivumele ukumbombozela kwabanye kulwenze bubuthathaka ukholo lwethu size siqalise ukukhalazela indlela asiphatha ngayo uYehova?
8. Yintoni eyabangela ukuba abakhonzi bakaThixo baqalise ukutyhola uYehova ngeengxaki zabo ngomhla kaIsaya?
8 Ubunzima bunokusidimaza. (Funda uIsaya 8:21, 22.) Ngomhla kaIsaya, isizwe sakwaYuda sazibona sesikwemaxongo imeko. Sasingqongwe ziintshaba. Ikati yayilala eziko. Inxele likaKhetsekile lalizenzela kwabaninzi. Into eyayiyenza mandundu le meko kukuba ayebhuqwa kanobom yindlala yokomoya. (Amosi 8:11) Kunokuba alufune kuYehova uncedo lokuhlangabezana nobo bunzima, amaSirayeli asuka ‘aqalekisa’ ukumkani wawo noThixo wawo. Ewe, ayetyhola uYehova ngeengxaki zawo. Ukuba sehlelwa yintlekele okanye iingxaki ezithile, ngaba inokwenzeka into yokuba sizibhaqe sele sisithi ezintliziyweni, ‘Ebephi uYehova ngexesha ebendimfuna ngalo?’
9. Kwakutheni ukuze amaSirayeli omhla kaHezekile agqibele ngokuba nembono ephosakaleyo?
9 Asizazi zonke izibakala. Ngenxa yokungazazi zonke izibakala amaSirayeli omhla kaHezekile ayevakalelwa ukuba indlela kaYehova ‘ayilungiswanga.’ (Hez. 18:29) Kwaba ngathi azenze ­abagwebi ­bakaThixo, exabisa imilinganiselo yawo yobulungisa ngaphezu kwaleyo kaYehova aza amgweba ngokusekelwe kolo lwazi lwabo lulinganiselweyo. Xa kukho ingxelo yeBhayibhile esingayiqondi kakuhle okanye indlela ezenzeka ngayo izinto kubomi bethu, ngaba inokwenzeka into yokuba sivakalelwe kukuba undonakele ukwindlela kaYehova ‘engalungiswanga’?—Yobhi 35:2.
10. Umntu unokuyenza njani impazamo yokuxelisa uAdam?
10 Sigxeka abanye ngezono neempazamo zethu. Kwasekuqaleni kwembali yoluntu, uAdam wagxeka uThixo ngesono asenzileyo. (Gen. 3:12) Nakuba uAdam wona ngabom, eyazi kakuhle nemiphumo yokwaphula kwakhe umthetho kaThixo, walibeka kuYehova elo tyala. Eyona nto wayeyithetha kukuba, nguYehova owamnika isimanga somfazi. Ukususela ngoko, nabanye abantu baye bazeka mzekweni begxeka uThixo ngeempazamo zabo. Ngoko ke, simele sizibuze oku, ‘Ngaba ukuphoxeka nokuxakaniseka ngenxa yeempazamo zethu kusenza singaneliseki yimilinganiselo kaYehova?’
11. Sifunda siphi isifundo kuYona?
11 Sisuka sicingele iziqu zethu. Umprofeti uYona akazange akholiswe sisigqibo sikaYehova sokuyenzela inceba iNineve. (Yona 4:1-3) Kwakutheni? Kubonakala ukuba eyona nto yayiphambili kuye yindlela aza kujongwa ngayo xa ingafikanga loo ntshabalalo wayeyibhengeza. UYona wacinga ngesiqu sakhe de walibala ngenceba awayemele abe nayo xa abantu baseNineve beguquka. Ngaba ayinakwenzeka into yokuba nathi sizibhaqe sele sicingela iziqu zethu de sibe nomsindo nxamnye noYehova kuba engade ayitshabalalise le nkqubo? Ukuba sekuqengqeleke iminyaka sibhengeza ukusondela kwemini kaYehova, ngaba ngoku sesiphelelwa ngumonde kuYehova xa sigxekwa ngabanye ngokuvakalisa isigidimi seBhayibhile?—2 Pet. 3:3, 4, 9.
UKUPHEPHA UKUBA “NOMSINDO NXAMNYE NOYEHOVA”
12, 13. Ukuba intliziyo yethu iqalisa ukuthandabuza izenzo ezithile zikaYehova, yintoni esimele siyixabise?
12 Yintoni esinokuyenza ukuba intliziyo yethu enesono iqalisa ukuthandabuza izenzo ezithile zikaYehova? Simele sikhumbule ukuba bubudenge obo. Enye inguqulelo yeBhayibhile ithi kwiMizekeliso 19:3: “Ubuyatha bomntu buyabonakalisa ubomi bakhe, aze emva koko asole uYehova.” (Byington) Sicinga ngoko, makhe siqwalasele iinkalo ezintlanu eziya kusinceda singaze sigxeke uYehova ngenxa yokuxakaniseka ziingxaki zobomi.
13 Xabisa ulwalamano onalo noYehova. Singayiphepha into yokuvumela ukungafezeki kwethu kusenze sibe nomsindo nxamnye noThixo ukuba silondoloza ulwalamano esinalo naye. (Funda iMizekeliso 3:5, 6.) Kufuneka sithembele kuYehova. Kwangaxeshanye, simele sikuphephe ukuba zizilumko gqitha emehlweni ethu size ke sicingele iziqu zethu. (IMize. 3:7; INtshu. 7:16) Aya kuba mbalwa ke amathuba okuba sigxeke uYehova ngezinto ezibuhlungu ezisehlelayo.
14, 15. Yintoni eya kusinceda singachatshazelwa kukumbombozela kwabanye?
14 Musa ukuyivumela impembelelo yabo bambombozelayo. Ngomhla kaMoses amaSirayeli ayenezizathu ezininzi zokukholelwa ukuba uYehova wayeya kukwazi ukuwangenisa kwiLizwe Lesithembiso. (INdu. 78:43-53) Kodwa athi akuva ingxelo embi yeentlola ezilishumi ‘akasikhumbula isandla sakhe.’ (INdu. 78:42) Ukuba siyacamngca ngezenzo zikaYehova, sikhumbule konke ukulunga asenzele kona, luya komelela ngakumbi ulwalamano lwethu naye. Oko kuya kusinceda singavumeli ukumbombozela kwabanye kusahlukanise noYehova.—INdu. 77:11, 12.
15 Kuthekani ukuba sibajonga kakubi abazalwana bethu? Xa sisenjenjalo, asinakukwazi ukuba nolwalamano oluhle noYehova. (1 Yoh. 4:20) Athi amaSirayeli akukhalazela ukumiselwa kuka-Aron enziwe umbingeleli, uYehova wawohlwaya ngokumbombozela kwawo. (Num. 17:10) Kunjalo ke, naxa sikhalaza simbombozela ngenxa yabo uYehova abasebenzisayo ukwalathisa inxalenye esemhlabeni yentlangano yakhe, siya kuba sikhalazela uYehova.—Heb. 13:7, 17.
16, 17. Yintoni esimele siyikhumbule xa sineengxaki?
16 Khumbula ukuba uYehova akangonobangela weengxaki zethu. Nakuba amaSirayeli ayemshiyile uYehova ngomhla kaIsaya, wayesafuna ukuwanceda. (Isa. 1:16-19) Enoba ziziphi na iingxaki esijamelana nazo, siyathuthuzelwa kukwazi ukuba uYehova usikhathalele yaye ufuna ukusinceda. (1 Pet. 5:7) Enyanisweni, uthembisa ukuba uya kusinika amandla okunyamezela.—1 Kor. 10:13.
17 Ukuba siphathwa kakubi—kanye njengoYobhi othembekileyo—simele sikhumbule ukuba uYehova akafaki sandla kulo mpatho. Ukuthiyile okungekho sikweni; uthanda ubulungisa. (INdu. 33:5) Ngamana singaxelisa umhlobo kaYobhi uElihu, owavumayo wathi: “Makube lee kuThixo oyinyaniso ukwenza ngobungendawo, nakuSomandla ukwenza ngokungekho sikweni!” (Yobhi 34:10) Kunokuba abangele iingxaki esinazo, uYehova usinika “sonke isipho esilungileyo naso sonke isipho esigqibeleleyo.”—Yak. 1:13, 17.
18, 19. Kutheni singamele simthandabuze uYehova? Zekelisa.
18 Ungaze umthandabuze uYehova. UThixo ugqibelele yaye iingcamango zakhe ziphakame lee kunezethu. (Isa. 55:8, 9) Ukuthobeka nokuthozama, kuya kusincede siyamkele into yokuba kulinganiselwe ukuqonda kwethu. (Roma 9:20) Asisoloko sinazo zonke iinkcukacha kwimibandela ethile. Umele ukuba ubazi kakuhle ubunyani balo mzekeliso uthi: “Ofika kuqala ukuza kumangala uvakala enyanisile, de kufike omnye uza kumgocagoca ngemibuzo.”—IMize. 18:17, iNew International Version.
19 Ukuba besinomhlobo esimthembayo aze enze into esingayiqondiyo ekuqaleni okanye esivakalelwa kukuba ayiqhelekanga, ngaba besiya kungxama simtyhole ngokwenza okuphosakeleyo? Ngaba besingayi kumthemba, ngakumbi xa sele sinethuba simazi? Ukuba sibaphatha kakuhle ngaloo ndlela abahlobo bethu abangafezekanga, ngaba besingamele simthembe ngakumbi ke yena uBawo wethu wasezulwini, ondlela neengcamango zakhe ziphakame lee kunezethu!
20, 21. Kutheni kubalulekile nje ukubeka ityala kumntu elimfaneleyo?
20 Beka ityala kumntu elimfaneleyo. Kutheni simele senjenjalo? Kaloku, ezinye iingxaki zethu sisenokuba sizibangele ngokwethu. Xa kunjalo, simele siyivume loo nyaniso. (Gal. 6:7) Masingazami ukugxeka uYehova ngeengxaki zethu. Kutheni kungebobulumko nje ukwenjenjalo? Cinga ngalo mzekelo: Imoto isenokukwazi ukubaleka. Ukuba umqhubi ebenokudlula kwisantya esifanelekileyo ngoxa eza kujika egopheni ize ke loo moto iye kuntlitheka, ngaba kumele kugxekwe umenzi wayo ngaloo ngozi? Unotshe! Ngokufanayo, uYehova usidale sanenkululeko yokuzikhethela. Kodwa uye wasinika imiyalelo esikhokelayo ukuze senze izigqibo zobulumko. Ngoko ke, asinaso kwaphela isizathu sokugxeka uMdali wethu ngeempazamo esizenzayo.
21 Kakade ke, asizizo zonke iingxaki esinazo ezibangelwa ziimpazamo nazizenzo zethu eziphosakeleyo. Ezinye izinto zisehlela ngenxa ‘yexesha nesehlo esingenakubonwa kwangaphambili.’ (INtshu. 9:11) Noko ke, eyona nto singamele siyilibale kukuba uSathana uMtyholi ngoyena nobangela wobungendawo. (1 Yoh. 5:19; ISityhi. 12:9) Nguye olutshaba lwethu—asingoYehova!—1 Pet. 5:8.
XABISA ULWALAMANO ONALO NOYEHOVA
UYoshuwa noKalebhi basikelelwa ngokuthembela kuYehova (Funda isiqendu 22)
22 Xa usebunzimeni, umele ukhumbule umzekelo kaYoshuwa noKalebhi. Ngokwahlukileyo kwezinye iintlola ezilishumi, la madoda mabini athembekileyo eza nengxelo entle. (Num. 14:6-9) Aba nokholo kuYehova. Sekunjalo, kwanyanzeleka ukuba azule entlango iminyaka eyi-40 kunye namanye amaSirayeli. Ngaba akhalaza okanye aba buhlungu, evakalelwa ukuba akukho sikweni oko? Nakanye. Athembela kuYehova. Ngaba asikelelwa ke? Umntu uyibuza njani loo nto! Kaloku, ngoxa sonke eso sizukulwana safela entlango, omabini la madoda angena ngazo zombini kwiLizwe Lesithembiso. (Num. 14:30) Nathi ke, uYehova uya kusisikelela ukuba “asidinwa” kukwenza ukuthanda kwakhe.—Gal. 6:9; Heb. 6:10.
22, 23. Yintoni esimele siyikhumbule xa sidinyazwa ziingxaki zethu?
23 Yintoni omele uyenze ukuba udimazekile ngenxa yeengxaki, ukungafezeki kwabanye okanye okwakho? Cinga ngeempawu ezimangalisayo zikaYehova. Malithi thaa engqondweni yakho ithemba akunika lona uYehova. Zibuze, ‘Bendiya kuba yintoni ngaphandle kukaYehova?’ Hlala usondele kuye, ungaze uvumele intliziyo yakho ibe nomsindo nxamnye naye!
Ukuphulaphula ukumbombozela kunokuba nempembelelo embi kuwe (Funda isiqendu 7)
IMBONISELO (YOKUFUNDISA) Agasti 2013